Maxaa ka soo baxay shirkii Jaamacadda carabta ee Sacuudiga ka dhacay.? – XOGMAAL.COM
Maxaa ka soo baxay shirkii Jaamacadda carabta ee Sacuudiga ka dhacay.?
Inkasta oo shirkan aan lagu soo hadal qaadin qadiyado carabta muhiim u ahaa sida xiisadda Khaliijka, duqeynta Mareykanka ee Suuriya, faragelinta Imaaraadka ee Soomaaliya iyo arrimo kale ayaa hadana laga soo saaray 29 qodob.
Hogaamiyeyaashii jeediyay qudbadaha oo kooban
Dhanka Suuriya: waxa la dhiirigeliyay in xal laga gaaro dhibaatada jirta, lana ilaaliyo midnimada dadka iyo dhulka Suuriya, iyada oo laga amba-qaadayo heshiiskii Jeneva 1 iyo qaraarkii golaha ammaanka 2254 ee 2015-kii. Waxaa kale oo ay dhaleeceeyeen adeegsiga maamulka Suuriya ee hubka Kiimikada iyaga oo beesha caalamka ka codsaday in la garab istaago shacabka Suuriya.
Ciraaq: waxaa ay sheegeen in ay muhiim tahay in la ixtiraamo qarannimada, amniga iyo madaxbannaanida dalkaasi laguna taageero cirib tirka argigixisada iyo in ciidamada Ciraaq lagu garab siiyo sidii ay u xureyn lahaayeen meelaha weli ku harsan gacanta cadawga.
Suudaan: waxaa la sheegay in lagu taageerayo ilaalinta qarannimadeeda iyo dadaallada horumarinta ee dhanka nabadda, amniga iyo dhaqaalaha.
Soomaaliya:waxaa ay sheegeen in ay ka taageeraan sidii amni iyo xasilooni u hirgelin lahaayeen, isla markaana ula dagaalami laahaayeen argigixisada, dhismaha hey’adaha dowliga ah iyo sida loo wajihi karo caqabadaha dhaqaale iyo midda horumar.
Comoros: waxaa lagu dhiirligeliyay in ay sii wadaan wada hadalka iyo sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen dal ahaan kuwa ka faa’ideysta aragtida 2030.
Imaaraadka Iyo Soomaaliya Oo Wada Hadalo Bilaabey (Tolow Yaa Dhex Dhexaadinaya??)
James Comey “Trump malaha anshax madaxweyne dumarkana ula dhaqmo si wanaagsan”!